ल्वाङ पानीको फाइदै-फाइदा : खालीपेटमा ल्वाङको पानी पिउँदा यी रोग देखि छुटकारा मिल्छ ! – " सुलभ खबर "
ल्वाङको सेवन मसलाको रुपमा अधिकांश मानिसहरुले सेवन गर्ने गर्दछन् । खासगरी ल्वाङमा युजन नामक तत्व पाइन्छ । युजनले धेरै प्रकारका स्वास्थ्य समस्यालाई समधान गर्दछ ।ल्वाङको सेवनले घाँटीको दुखाइको निको बनाउँछ बारेमा धेरैलाई अवगत भएको कुरा हो ।
भारतका आयुर्वेदिक विज्ञ अबरात मुल्तानीले ल्वाङको सेवनले बान्ता हुन नदिने, पेटको समस्या समाधान गर्ने, तनावलाई कम गर्ने र जीउँ दुख्ने लगायतका समस्यालाई समधान गर्ने कुरा बताएका छन् । पछिल्लो समयमा चिन्ता र थकानको कारणले युवाहरुमा विभिन्न समस्याहरु देखापरेको छ । यस्तो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि ल्वाङलाई प्रभावकारी औषधी मानिएको छ ।
ल्वाङलाई सबैले दिउँसोको समयमा मात्र सेवन गर्ने गर्दछन् तर यसको सेवन गर्नको लागि उत्तम समय भनेको बिहानको समय हो । बिहानको समयमा ल्वाङ्को सेवन गर्दा चिन्ता र थकान लगायतका अन्य समस्या समधान गर्न सकिन्छ । चिन्ता र तनावबाट जोगिनको लागी ल्वाङलाई जथाभावी तरिकाले सेवन गर्न भने हुदैन् । ल्वाङ्को सेवन सदैव खाली पेटमा ल्वाङको पानी बनाएर गर्नुपर्दछ ।
ल्वाङ पानी बनाउँदा ५ वटा जति ल्वाङलाई एक गिलास पानीमा राती सुत्नु अघि भिजाउनुपर्दछ । रातभरी भिजाएपछि पानी बिहानको समयमा ल्वाङलाई राम्ररी निचोरर छानेर पिउनेगर्नुपर्छ । धेरैको बानी जे कुरा पनि निकै हतारमा पिउने वा खाने हुन्छ , तर यसो गर्नु राम्रो कुरा होइन । पिउँदा एकदमै आरामले बिस्तारै पिउनुपर्दछ । यसरी पानी पिउँनाले स्वस्थ्यमा कुनै पनि किसिमको साइड इफेक्ट देखा पदैन् ।
ल्वाङ्को पानी सेवनगर्नुको फाइदा कस्ता छन् त ?
१. तनावबाट छुटकारा पाइने ।२.कसैलाई निद्रा लाग्दैन् भने यसरी दैनिक रुपमा ल्वाङ्को पानी सेवन गरेमा निद्रा लाग्नेछ ।३. ल्वाङ्ले पाचन कार्यलाई ठिक गर्दछ, त्यस्तै बान्ता हुने, मर्निङ सिकनेस मोशन सिकनेसमा पनि निकै फाइदा गर्दछ ।४. शिघ्रपतनको समस्याको लगाी ल्वाङ एक प्रभावकारी औषधी हो ।
त्यस्तै ल्वाङको सेवन गर्नुको अन्य पाइदा यस्ता छन् ।
-एसिडिटी – ल्वाङ सेवन गर्नाले सेलाइवा उत्पादन कार्य बढेर खानालाई राम्ररी पचाइ पेटको एसिडिटीको समस्या हुदैन् ।-मुटुको समस्या नहुने – दैनिक रुपमा एउटा ल्वाङको सेवन गर्नाले कोलस्टोरको मात्रा कम भई मुटुसम्बन्धी सम्स्या हुनबाट बचाउँछ ।
-घाउ निको बनाउने – ल्वाङमा एन्टिब्याक्टेरियाल तत्व हुन्छ । उक्त तत्वले घाउँलाई चाडैं निको बनाउँछ ।-रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने – खानामा अथवा चियामा ल्वाङ मिसाएर सेवन गर्नाले रोगसगँ लड्ने क्षमताको विकास हुन्छ ।
-अनुहारमा चमक – दिनम दुईपटक ल्वाङको सेवन गर्नाले अनुहारको चमक पनि बढ्छ ।-त्यस्तै ल्वाङ्ले नरम छाला बनाउने, आँखालाई फाइदा गर्ने, पिनास निको बनाउँछ ।